Venezoela: Ny fifidianana amin’ny 26 Septambra, ny fahafanam-po sy ny hevitra ao amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Venezoela: Ny fifidianana amin'ny 26 Septambra, ny fahafanam-po sy ny hevitra ao amin'ny Twitter
Voadika ny 24 Septambra 2010 11:13 GMT
Ny 26 Septambra ho avy izao, dia hampihatra ny zon'izy ireo hifidy amin'ny fifidianana faha telopolo nandritra ireo iraika ambinifolo taona nitondran'ny Filoha Hugo Chávez izao ny vahoaka. Hanavaozana ny Antenimieram-pirenena manontolo ireo fifidianana ireo- izay Kongresy teo aloha ary ankehitriny dia rantsana mpanao lalàna tokana. Hifidy solom-bavam-bahoaka 165 ho an'ny antenimieram-pirenena ary 12 ho an'ny antenimieran-doholona Latina Amerikana; hanompo ny firenena ny mandritra ny 2011-2015 ireo voafidy. Fibanjinana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2012 io fifidianana io. Iray amin'ireo fitaovana be mpampiasa mandritra ny fanentanana ho amin'izany ny Twitter.
Ilaina ny manamarina fa vao haingana izay dia nahazo ny laharana fahatelo erantany amin'ny fidirana Twitter i Venezoela. Ny fidiran'ny Filoha Chávez tao amin'ny tambajotra tamin'ny faran'ny volan'Aprily dia nampitombo 4,8% ny fampiasana Twitter, ary manana mpanaraka mihoatra ny 800 arivo i Chávez (@chavezcandanga) amin'izao fotoana izao; sady arahan'ireo mpomba azy izy no arahan'ireo mpanohitra ihany koa.
Miteny i Jhonny (@jhgra) ao amin'ny Twitter:
Manana mpanaraka mpanaraka 819 arivo sy 543 i @chavezcandanga ary mpanohitra mijery izay hambarany ny ankamaroan'izy ireo
Mitandrina amin'ny herin'ity fitaovana ity ireo mpanaraka sy ireo mpanohitra, ary ireo mpifaninana 105 [es] ho eo amin'ny toeran'ny fihaonana dia manana kaonty Twitter izay matetika hampiasain'izy ireo amin'ny fanentanana. Ny mpifaninana avy any amin'ny mpanohitra María Corina Machado (@MariaCorina2010) dia manakiana ny Antenimieram-pirenena amin'izao fotoana ao amin'ny Tweet-ny:
Ity ihany ilay Antenimieram-pirenena izay nanangana vaomiera mba handinihana ny fahafatesan'ireo biby fiompy; nefa tsy nanao fanadihadihana fahafatesan'ireo Venezoalana mihisa 16 arivo tamin'ny taona 2009
Ny kaonty Twitter-n'ilay mpifaninana María Corina Machado (@MariaCorina2010). Ny vakin'ilay sary famantarana "Isika no maro"
Ilay mpifaninana mpomba an'i Chávez, Freddy Bernal (@FreddyBernal) dia nampiseho ny fanohanany ny Filoha:
Tsy hilavo lefona manoloana ny mpanakanrena tsy tia tanindrazana izahay. Ny Mpitarika Chávez ho ao amin'ny Antenimieram-pirenena
Tahaka ireo mpifaninana, ny vahoaka izay mankasitraka – ao anatin'ny zavatra maro hafa – ny fizaran'ny fitondrana na ny an'ny mpanohitra ny fomba fijeriny ny zava-misy eo amin'ny firenena, ny fitiavany hifidy, sy ny fitiavany ny mpifaninana ankasitrahany.
Manohana ny mpifaninana ankasitrahany i Juan Carlos Alvarado (@juanc_34) :
Mijereva ny fantsona i androany, manome valinteny mazava sy miaro ny lalana sosialista sy manaja ny mahaolona ny mpiray tanindrazana amintsika @freddybernal
Nandefa hafatra ho an'i Freddy Bernal ihany koa i Omar Castejon (@castejon1):
Aza manaiky tsindrin'ny mpanao gazety ianao ry namana @FreddyBernal, SOSIALISTAN'NY FIRENENA! NA NY FAHAFATESANA! HANDRESY ISIKA RY NAMANA!
Mieritreritra i José Leonardo Hill (@joselhill) fa:
Mila mandresy isika amin'ny fifidianana, mba hanamarina ny Fandrosoan'ny sosialisma mivoatra, any Venezoela sy manerana izao tontolo izao. @PartidoPSUV
Kaonty Twitter-n'i Omar Casterjon (@castejon1), mpanohana an'i Chávez. Ny sary aoriana : "PSUV: Ankolafin'ny Sosialista Mikambana any Venezoela"
Amin'ny lafiny hafa, maneho fiahiahiana mitombina amin'ny fazotran'ny demokrasia ny mpanohitra, ary amin'ireo zava-mitranga maro dia manondro ireo fitoviana amin'ny modely Kiobana. Ana (@anabelland), miaraka amin'ireo mpanaraka mihoatra ny 5000, dia manontany:
Demokrasia? tsy manana hevitra amin'ny mety ho dikan'izany ve ianao? RT @Reporte360: Chávez: “Tonga teto izahay ka tsy hiala” http://bit.ly/bnGicV
Mandrisika ny mpanaraka azy hifidy sy hanome isa an'i Kioba ho ohatra mendrika i Jacqueline González (@jacogori), manonona ny mpifaninana mpanohitra Maria Corina Machado:
Mifidiana! RT @globovision Corina Machado: “Hifidy isika na ny amin'ny fomban'ny Komonisma Kiobana, na ny demokrasian'ny Venezoelana” http://bit.ly/aX0yth
Mamerina mi-tweet ny resadresaky ny mpanoratra tantara foronina sy poety Venezoelana iray i La Resistencia (@Resistenciavzla):
RT @ftapia: Rafael Cadenas: Afaka tsaraina foana ny Demokrasia, miharatsy hatrany ny fahefana, fifidianana ao amin'ny #26S #MUD #Venezuela
Fomba fijery roa amina firenena iray, izay handraisana fepetra tsy mihoatra ny 10 andro. Luis Vicente León (@luisvicenteleon), Filohan'ny Datanálisis –iray amin'ireo foibe mpandinika manamboninahitra indrindra ao amin'ny firenena– dia maminavina fa mety ho henjana ny vokatry ny fifidianana izay hahazoan'ireo mpifaninana mpomba an'i Chávez 52% ary hahazoan'ny mpanohitra 48% [es].
Tsy mahazo alalana hamoaka ny vaovao ofisialy mikasika ny fifidianana amin'ny Twitter ny media sy mpanao gazety any Venezoela. Araka izany dia hanana ny fahefana hampahafantatra avy amin'ireo mpifaninana mihisa 140 ny vahoaka amin'ny 26 Septambra.